Isbedel OST ilaa PST
Bogga ugu weyn Products DataNumen Exchange Recovery Isbedel OST Faylka Faylka PST
Isticmaalka DataNumen Exchange Recovery si loogu beddelo OST Faylka Faylka PST
Maxaa yeelay Microsoft Outlook ma furi karto galka khad la'aanta ah (OST) faylka toos ah, marka aad u baahan tahay inaad marin ka hesho xogta ku jirta OST faylka, waa inaad u badashaa feyl PST ah oo lagu aqoonsan karo Outlook.
Xaaladaha qaarkood ee caadiga ah markaad u baahato inaad beddelato OST PST waa:
Sanduuqa isweydaarsiga isweydaarsiga OST faylka lama heli karo sababo jira awgood iyo OST faylka waa agoon. Waxaad u baahan tahay inaad dib u soo ceshano xogta ka soo.
The OST faylka ayaa kharribmay ama dhaawacmay. Waxaad rabtaa inaad ka soo kabato xogta ku jirta.
Waxaad rabtaa inaad hesho xoogaa xog ah oo kaliya ka jira deegaanka OST gudbiso.
Iyadoo DataNumen Exchange Recovery, waad beddeli kartaa OST u fayl faylka PST si fudud oo hufan.
Si loogu badalo OST faylka PST, fadlan samee sida soo socota:
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan badalin OST faylka faylka PST leh DataNumen Exchange Recovery, fadlan xidho Microsoft Outlook iyo wixii kale ee barnaamijyo ah ee marin u heli kara ama wax ka beddeli kara OST gudbiso.
Marka la eego, DataNumen Exchange Recovery badalo doonaa OST fayl u gal feyl PST cusub oo la yiraahdo xxxx_recovered.pst, halkaasoo xxxx uu yahay magaca isha OST faylka. Tusaale ahaan, il ahaan OST Faylka Isha.ost, Faylka PST ee asalka loo rogay wuxuu noqon doonaa Source_recovered.pst. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Waxaad ku qori kartaa magaca faylka PST si toos ah ama waxaad riixi kartaa badhanka si aad u caleenta u xulato magaca faylka PST.
Click ah batoonka, iyo DataNumen Exchange Recovery doonaa start iskaanka iyo badalida xogta isha OST faylka u gal faylka PST Bar horumarka
Kadib geedi socodka beddelidda, haddii xogta si guul leh loo beddelay, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale ah:
Hadda waxaad ku furan kartaa feylka PST ee la beddelay Microsoft Outlook oo aad ka heli karto xogta ku jirta.
Isbedel OST Faylka Faylka PST